Paoma miaraka amin'ny kanelina - Resipe Thermomix | ThermoRecipes
Isan'andro dia tiako ny manomana bebe kokoa jam miaraka amin'ny Thermomix. Tsotra be izy io ary noho io dia manomboka manandrana karazana tsiro maro karazana izay tsy azoko an-tsaina akory.
Androany maraina teo am-pisakafoanana maraina dia hitako fa sahirana kely tamin'ny fitateram-bahoaka izahay, tsy nanana afa-tsy antsasaky ny tavoara iray taminay voasary. Nojereko ny vilia voankazo, izay nananako indrindra paoma, Ka nametrahako tanana hiasa.
Tiako ny paoma asada, in mofo, in compote, in mofomamy kely ary saika amin'ireny fomba rehetra ireny dia manana kinanona izay tianay izy. Noho izany dia nahazo ny hevitra aho omeo tsiro bebe kokoa ity jam ity.
Nahomby ny vokany. Mahafinaritra izany ary heveriko fa fitohanana tsara apetraka ao mofomamy, ao anaty biskoitra na miaraka amin'ny yaourt na curd fotsiny.
1 Paoma miaraka amin'ny kanelina
Mety tsara amin'ny toast na ampiasaina amin'ny mofo sy biskuitra.
Paoma 600 g (peeled sy quartered)
Apetrakay ao anaty vera ny paoma, ny siramamy ary ny ranona voasarimakirana. Izahay dia manao fandaharana 30 segondra, hafainganana mandroso 5-7-10.
Manampia kanelina sy programa iray sotro 30 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 3.
Rehefa tapitra ny 10 minitra voalohany dia esorinay ny kaopy ary apetraho eo amboniny ny harona mba hitrandrahana tsara kokoa ary hisorohana ny famaohana.
Rehefa vita dia apetrakay ao anaty siny fitaratra ny foara, avelao hampangatsiaka izy ireo ary hapetraka ao anaty vata fampangatsiahana.
Raha tsy handany azy eo noho eo isika dia afaka fonosana banga io.
Vantany vao nosokafana dia mitazona azy ao anaty vata fampangatsiahana.
Fanazavana fanampiny - Paoma natsatsika tamin'ny papillote / Mofomamy fromazy La Viña miaraka amin'ny paoma / Applesauce / Mofomamy paoma haingana / Ahoana ny fomba pasteurise sy fitehirizana banga
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, Jams ary mitahiry, Postres, Resipeo ho an'ny ankizy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Recipe manokana » Celiac » Paoma miaraka amin'ny kanelina
Marina tanteraka ny anao, matsiro be ny fitohanan'ny olona ary ity iray misy kininina ity dia tokony ho tsara kokoa.
Suny Senabre dia hoy izy:
Ity dia mety ho matsiro be, efa ela aho tsy nanao paoma. Omaly aho dia nanomana frezy ary ny marina dia matsiro be.
Valiny tamin'i Suny Senabre
Ny omanin-voatabia ihany no namboariko tamin'ny kanelina ary tianay izany… Ny fahitana ireo jamam-bary matsiro ireo dia mihoby aho!
Mahaliana, voatabia miaraka amin'ny kanelina. Tsy mbola nieritreritra an'izany aho. Tsy maintsy hosedraina izany. Misaotra anao tamin'ny soso-kevitrao.
Ary raha tokony ho kanelina indray andro hafa dia andramo atao amin'ny jirofo, mahatalanjona
Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny tolo-kevitra Elena. Hanaraka ny torohevitrao aho fa hanao piramaso, izay ananako betsaka.
!!!! Eo amin'ny laharana fahefatra izahay !!!!! Arahabaina amin'ny asanao ary misaotra noho ny zavatra rehetra ampianarinao anay isan'andro .. ..
Mila mitahiry banga ao anaty vata fampangatsiahana ve ianao? misaotra ary tohizo toy izao
Rehefa manidy azy ianao dia afaka mitahiry azy amin'ny toerana mangatsiatsiaka toy ny pantry na ny arimoara mandritra ny volana vitsivitsy nefa tsy misy olana, fa rehefa nosokafana dia azo tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana.
Ity jam ity dia nataoko, iray volana lasa izay, hanaparitahana azy amin'ny mofo paoma sy ny lozanao. Andramo fa matsiro.
Amin'ity herinandro ity aho dia manamboatra ny mofo sy manandrana azy. Marina tokoa fa marina ianao ary ho matsiro.
yoli dia hoy izy:
mandra-pahoviana ny fikatsoana vita indray mandeha tao anaty vata fampangatsiahana
Valio i yoli
Ny tena marina dia roa volana aho tsy mieritreritra fa manana olana ianao, fa ao an-trano foana no mamita izany alohan'ny handaniana iray volana eo ho eo.
Salama, hiezaka hanamboatra azy aho. Tsy mbola nanao «mache» mihitsy aho. Te-hanontany anao aho. Te-hanao layonesa na profiteroles amin'ny teny Catalan aho. Manana ny fomba fahandro indray andro aho nanao azy ireo ary tonga lafatra izy ireo. torotoro izy ireo fa azo omena fisaorana isan'andro mifidy anao aho raha mandresy ………………… misaotra.
IZAO HERINANDRO IZAO dia NANAO CUSTOMS STRAWBERRY ARY TENA TSARA AZY FA NY COLOR Q MIVOAKA NY BROWN
TANORA SY FITONDRANA NY STRAWBERRIES
AZONAO ATAO LAZAINAO IZAY TSY NETY NATAO?
MANKASITRAKA NY nandefasana ahy ireo RESIPA
Valiny amin'i JULIA
Salama, tsara daholo ny fitohanana. Raisiko amin'ny paompy ny paoma ary koa rehefa tiako ny camela dia ataoko amin'ny fotoana itondrako azy. Misaotra nizara .. Manantena aho fa handresy… ..
Marymary dia hoy izy:
Tiako koa ny manao jam miaraka amin'ilay thermomix! raha ny marina dia manomboka amin'ilay frezy aho izao !!!!!!
Valiny tamin'i Marymary
Salama, tsara be ilay izy, ataoko anio.
Fanontaniana iray, olana ve ny karazana paoma? Misy zavatra maromaro tsy tianay hohanina ve ary manome pochas ahy izy ireo ary tiako hatao miaraka amin'ireo.
Misaotra ny resipeo, izay manankarena.
Valiny tamin'i Mari Carmen
Pokhara dia hoy izy:
Tsy mbola nanomana jamam-bolo mihitsy aho tao amin'ny thermomix, fa amin'ity iray ity dia matoky aho satria tiako ny zavatra rehetra misy paoma sy jam… ufff, mila manandrana ianao.
Valio amin'i Pokhara
Miarahaba anao aho noho ny fametrahana an'ity fomba fahandro ity ho an'ny memelada paoma, matsiro, io fikoloana kanelina io no tsara indrindra, miandry aho hangatsiaka hametraka ny cuhara ha, ha, ha,
Tiako ny paoma amin'ny lafiny rehetra, fa izany no tiako ananana azy amin'ny maraina. Ny mikasika ny kanelina dia manome azy fikitihana manokana.
Heveriko fa tsy maintsy ho tsara izany, fa raha tiako ho maivana kely kokoa, azoko atao ve ny manova ny siramamy ho mpamanamana? misaotra ary mifalia fa handresy izahay.
Mazava ho azy Marisa, izay tsindrin-tsakafo rehetra ataontsika dia azo amboarina amin'ny zava-mamy. Tamin'ity Noely ity dia nanamboatra roscón ho an'ny havako diabeta aho ary fahombiazana lehibe izany.
Miala tsiny aho raha miverina indray, io dia manana fisalasalana aho rehefa manamboatra cookies, azonao ovaina menaka oliva ny dibera, toy ny amin'ny biscuits tato ho ato dia manao cookies aho ary tiako ho fantatra satria salama kely kokoa izy ireo.
Karmela dia hoy izy:
Isaky ny tiako bebe kokoa ny resinao dia mikasa ny hanao an'io koa aho Kisses
Valiny tamin'i Karmela
Tena tsara izany, azo antoka fa tianao ny manomana sakafo maraina tsara.
Tiako ny fomba fahandro ho an'ny jam, saingy nanao frezy aho tato ho ato ary tsy haiko hoe hatao raha simba, mandra-pahoviana no nosokafana tao anaty vata fampangatsiahana?
Taona maro lasa izay no nitrangan'izany tamiko fa ankehitriny isaky ny manao Jam aho dia manamboatra ireo siny hametrahako ny kitapo. Apetrako ao ambony izy ireo ary apetrako ao anaty microwave, anafana azy ireo mandra-pahatonga ny rano hangotraka kely, dia avoakako avy eo ary atsipiko ny rano amin'ny famelana azy hianjera amin'ny sarony izay hanidy ny tavoara, izao no fomba Manadio ireo siny aho ary manampy avy hatrany ny jam, rehefa mafana kely izy, dia apetako eo amboniny ny taratasy misy menaka fanosotra, akatoko ary avelako hitsoaka mandritra ny 24 ora aho ary tsy manimba ahy io fombafomba io. Manantena aho fa afaka manampy anao io.
Misaotra, andramako izany.
Malta dia hoy izy:
Salama! Tena tsara izany paoma paoma izany, mbola tsy nanandrana azy mihitsy aho, fa ho faly aho!
Efa nanandrana stevia ho mpamanamana ve ianao?
Valiny amin'i Malta
Ny marina dia tsy fantatro izay mamy. Matetika aho mampiasa refy granular ary mandeha tsara.
Omaly no nahavitako azy, ary tsy lazaiko anao akory hoe ahoana ny vokany, nampiditra paoma 700 tamin'ny siramamy 400 aho ary avy eo nomeko ny hafanan'ny varoma nandritra ny 10 minitra, mba ho somary matevina ihany, I tsy tiako be dia be izy ireo, mihoatra ny zava-drehetra satria ny zanako lahy manerana ny toerana rehetra.
Marina ny anao, tiako koa ny zavatra matevina kokoa sy tato ho ato izay nanitatra ny minitrin'izy rehetra, indrindra ilay frezy.
Omaly aho dia nanao frezy ary tsy nasiako voasarimakirana tamin'ireny sombin-koditra fotsy ireny, izay hoy ny boky tamiko, nanampy ranom-boasarimakirana aho, heveriko fa hivoaka ihany koa izy io, korontana ny fanalana ny voasarimakirana manala voa.
Nametraka mihoatra ny 10 minitra ihany koa aho amin'ny maripana varoma fa tsy 100º mba hihalehibe, antenaiko fa nivadika ho tsara.
Mari Carmen, tato ho ato dia nasiako sotro voasarimakirana ilay voaroy ary ny maripana varoma nandritra ny 35 minitra ary tena tsara izany.
Tsara tsia, tena tsara ny jam,
fa te-hanome hevitra momba ny boky paoma mahafinaritra aho, manana siramamy 40g sotro ianao (: misaotra anao mitohy toy izao
Misaotra anao, vao notantaraiko tamin'i Rosa io, saingy tsy fantatr'izy ireo intsony raha afaka manova azy izy ireo, diso ny fandikana azy. Heveriko fa saika ny olona rehetra nahavita jam dia mahafantatra fa mila voankazo mitovy amin'ny ilantsika siramamy isika.
Rosa Ardá dia hoy izy:
Rosa sy Silvia. Raikitra io. Azonao atao ny misintona ny boky indray, tsy misy hadisoana.
Valiny tamin'i Rosa Ardá
Rose !!! Efa ny divay sahady io, amin'izao fotoana izao 😀
Mahafinaritra ilay boky, Rosa!. Arahabaina satria nahavita asa tsara ianao. Oroka.
Misaotra betsaka amin'ity asa lehibe vitanao ity.
Tiako ity jam ity! Nataoko matevina be izy io ary nikitika kanelina ... tsy manam-paharoa amin'ny sakafo maraina. Izaho koa dia nanao ny kinova "hazavana", fantatrao ... tsy maintsy mitandrina ianao, ary hatramin'ny maraina dia efa nomaniko ny kinova frezy, hazavana ihany koa, saingy miombon-kevitra amin'i Silvia aho, mila avelanao minitra vitsy hafa , matevina kely kokoa dia mahafinaritra kokoa. Misaotra tovovavy!, Oroka.
Marién, ohatrinona ny zava-mamy nampidirinao?
Nataoko ny Jamam-boasary maivana miaraka amin'ny zava-mamy. Ho an'ny frezy 500 grama dia nasiako refy 100 grama, fa tena mamy tokoa, amin'ny manaraka dia ny antsasako ihany no andramako dia holazaiko anao izany.
Salama! Lazao ahy hoe ohatrinona ny zava-mamy nampidirinao farany satria tiako hamboarina ho an'ny reniko izay tsy mandray siramamy ary tsy fantatro ny refy. Manana ny thermomix mandritra ny tapa-bolana aho ka mila tsakoina daholo na very very hehe. Misaotra "
Sara, rehefa manao Jam miaraka amin'ny zava-mamy aho dia mamy vovoka ary miaraka amin'ny voankazo 60 gr ho an'ny 600 na 500 gr dia ampy, na dia mijanona kely aza izy io indraindray satria tsy matevina toy ny siramamy ilay mamy ary apetrako ao anatin'ny 5 minitra fanampiny eo ho eo mahandro amin'ny jam.
Misaotra betsaka anao mamaly. Eny, namboariko tamin'ny kanelina ilay paoma paoma, saingy tamin'ny siramamy ary nalefany tao anatin'ny 4 andro. Nataoko izay nolazain'i mari carmen mba hamelako azy kely kokoa hihamatevina ary araka ny nolazain'izy ireo tamiko raha matevina izany, (tian'ny raiko izany satria nilaza izy fa rehefa atsobony ilay toast dia tsy milatsaka izy).
Rahampitso te-hanao sakamalao serizy aho, efa nanome boaty roa izy ireo ary tsy hitako izay hatao amin'izy ireo. Efa nanao an'io ve ianao?
Mbola tsy nanao «chiffre cherry» mihitsy aho. Ahoana ny fahitanao azy? faharetana ahoana ny famotehana ny taolana !!
Nanjary tsara izany, asa mafy nefa nanana tsiro tena tsara, fifangaroana teo amin'ny frezy sy ny voaloboka. Izaho koa dia nanao ny voaloboka indray andro ary mitovy ihany, matsiro. Andro paiso aho izao. Oroka lehibe
ANA 5 dia hoy izy:
Salama zazavavy, nomen-dry zareo boaty sara koa aho ary nanao «jam» aho, tena tsara izany, ny fanesorana ireo taolana napetrako tao anatin'ny thermo 4 s hafainganam-pandeha 4 ary nesorin'izy ireo tanteraka, avy eo ianareo manana asa manasaraka azy fa kely noho ny manala iray iray raha tsy manana ilay fitaovana manala azy ireo ianao. Jereo raha misy manampy anao.
Valiny amin'ny ANA 5
ana beatriz dia hoy izy:
Mahavariana fotsiny !!! Tiako izany ary satria manana paoma maro aho, rahampitso dia miasa aho ary manao zavatra bebe kokoa
Mamaly an'i ana beatriz
Faly aho fa tianao ilay izy !!
Ana + dia hoy izy:
Vao avy nanao an'ity jam ity aho, ary nivadika ho tsara. Misaotra betsaka amin'ny recette :) !!
Valio i Ana +
Ana, faly be aho fa tianao io !!
Amin'ity Krismasy ity dia hanome harona kely ho an'ny havako misy vokatra vita an-trano aho ary zavatra iray tany am-boalohany. Satria io jam io dia tsy ho hitanao ao amin'ny supermarket, hianjera izy io
Fanontaniana roa no apetrako aminao ...
1.-Ohatrinona ny sambo itahirizanao azy?
2.-hamonosana banga azy io: mikasika ny tara-pahazavana ve ny kianjan'ilay taratasy legioma?
3.-manidy azy ary mamela azy mivadika mandritra ny 24 ora dia mahatonga ny banga ary tsy ilaina ny manala azy ao anaty fandroana rano? (Atao toy izany ihany koa amin'ny fitehirizana hafa toy ny pisto? Izany ve dia hanamaivana ny asa)
Raha tianao tsy ho matevina kokoa izy dia avelao izy hahandro minitra vitsy. Azonao atao ny manokatra ny Thermomix indraindray mba hahitana raha tianao ny hatevin'ny fako ary ajanony ny milina rehefa hitanao fa mety.
Misaotra betsaka amin'ny torohevitra Ascen !! Rehefa afaka 2 volana dia naveriko tamin'ny minitra vitsy latsaka io ary nopetahako peta-kofehy. Mahafinaritra izany, heveriko fa tsy haharitra ny herinandro ... efa ampiasaintsika ho an'ny zavatra rehetra ...
Faly aho fa lasa tsara be ianao, Asun. Sarotra ny mandeha amin'ny voalohany fa tsy misy toa ny manandrana hatrany.
Misaotra betsaka anao matoky anay.
Sary avy amin'ny Elena Canga Alvarez dia hoy izy:
Natsiro izy io ary nisy temotra tonga lafatra.
Valiny an'i Elena Canga Alvarez
Mofomamy vita amin'ny crème miaraka amin'ny amandy
Ny ovy nopotsehina tamin'ny soavambe ho an'ny 2